कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन वाम गठबन्धनको कार्ड ! « Sansar News
कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन वाम गठबन्धनको कार्ड !
१९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १७:१७
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका निम्ति निकै उपलब्धीमूलक रह्यो । नतिजा आएका ७५२ मध्ये कांग्रेस एक्लैले ३२९ पालिकाको नेतृत्व जित्यो । कांग्रेसले निकै उत्साहजनक नतिजा ल्याउँदा गठबन्धनका अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीका लागि भने निर्वाचनको परिणाम त्यति उत्साहजनक देखिएन ।
कांग्रेसले उत्साहजनक रुपमा जित हाँसिल गर्दा माओवादी केन्द्र १२१ पालिकासहित यसअघिकै हैसियतमा देखियो भने जसपा ३० पालिका र एकीकृत समाजवादी २० पालिका जित्दै उत्साहित हुने अवस्थामा आएनन् । जसपा तत्कालिन समाजवादी फोरमको हैसियतमा त पुग्यो तर, आधार क्षेत्र मधेश प्रदेशमै भने निकै कमजोर देखियो ।
चुनावी तालमेलअनुसार नतिजा नआउँदा गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसप्रति अहिले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा त्यति खुसी देखिन्नन् । धेरै सिट जितेर पहिलो बनेको कांग्रेसप्रति अहंकार पलाउने डर पनि सत्ता साझेदारहरुमा देखिएको छ । सहकार्य तोड्न आन्तरिक कारणबाटै नसकेका दलहरु कांग्रेसलाई फकाउँदै, धम्क्याउँदै, तर्साउँदै आफु अनुकुल गठबन्धन लैजाने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । उनीहरु अहिले कांग्रेसमाथि विभिन्न अस्त्रको प्रयोग गरेर दबाब बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनकाे बैठक ।
बालुवाटार बैठक पछि कांग्रेसलाई खुला चेतावनी
स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएको दुई सातापछि जेठ १६ मा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए । गर्मागर्म छलफल भएको उक्त बैठकबाट दलहरुले आगामी प्रदेशसभा र संघीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने सहमति गरे । तर, बालुवाटारको माझामाझ पछि भने सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले नेतृत्वकर्ता कांग्रेसप्रति खुला ढंगले नै चेतावनी दिने र दबाब दिने शैलीका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
बालुवाटारमा निर्वाचनको समीक्षा भएको पर्सीपल्ट पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई त्रर्साउन भरपुर समय प्रयोग गरे । उनले कांग्रेसलाई अहंकार पाले ठेगान लगाइदिने पनि चेतावनी दिए ।
“हिजो एमालेमा धेरै अहंकार देखिँदा हामी त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौं, अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ”, जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, “हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ तर, हामी चिन्तित छौँ यतिबेला, फेरि कांग्रेसमा पनि एमालेजस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नि होइन, स्थानीयमा पनि धेरैजसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र संघमा पनि ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लगाएजस्तै कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् ।”
यता, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै “बेइमानी गरे भष्म हुने” चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई अहंकार छाडेर सुध्रिन आग्रह गरे ।
“धोका दिनिे तरिका विभिन्नि पार्टीहरुले यसपटक पनि अंगालेका छन्, उहाँहरुलाई भन्न चाहान्छु, बेइमानी नगर्नुस् । बेइमानी गरे तपाईँहरुको पनि हरि बिजोग हुनेवाला छ”, अध्यक्ष नेपालले भने, “ती पार्टीहरु भष्म हुनेछन्, सुध्रिन आग्रह गर्दछु ।”
प्राइम टेलिभिजनकाे कार्यक्रममा नेताहरू ।
प्रधानमन्त्रीको अफर र वाम गठबन्धनको चर्चा
कांग्रेसलाई तर्साइरहेका दलहरुले वाम गठबन्धनको पनि चर्चा चलाउन थालेका छन् । प्रचण्डले प्राइम टाइम नामक एक टेलिभिजनकाे सार्वजनिक कार्यक्रममै आफुँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताए । तर, उनले आफु पाँच दलीय गठबन्धनकै पक्षमा रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले वाम गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताइरहेका बेला गठबन्धनका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताएका छन् । तर, उनले पनि आफुँ कुनै प्रकारको लोभ लालचमा नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
“प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भन्नुभएको थियो, त्यसको जवाफमा मैले तपाईंलाई मात्र हैन, अन्त पनि आएको छ भनेर संकेत गरेको थिएँ”, माधव नेपालले भने, “यो कार्ड मान्छेलाई मुर्ख बनाउने तरिका हो । म कुनै प्रकारको प्रलोभन र लालचमा पर्ने मान्छे हैन ।”
नेताहरुले वाम गठबन्धन बनाउने सर्तमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको संकेत गरेका छन् । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा पनि यस्ता चर्चाहरु नेताहरु चलाएका थिए ।
कांग्रेसलाई गलाउने रणनीति
तत्कालिन नेकपा विभाजनको समय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीले सबैजसो शीर्ष नेताहरुलाई भेटै विच्छे प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने गरेको कुरा बाहिरिएका थिए । प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामेदव गौतमले त्यस्तो चर्चा धेरै चलाएको भएपनि ओलीले भने त्यस्तो अफर गरेको विषयको खण्डन गरेका थिए । अहिले पनि त्यस्तो चर्चा प्रचण्ड र माधव नेपालबाट चलाउन थालिएको छ ।
एमालेका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमालेले त्यस्तो अफर नगरेको बताउँछन् । कांग्रेसलाई गलाउन प्रचण्ड र माधव नेपालले यस्तो गलत चर्चा चलाएको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष ज्यूले निर्वाचन पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कुनै पनि नेतालाई भेट्नुभएको छैन, हाम्रो कुनै तहबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गर्नेबारे कुरा भएको छैन । – खगराज अधिकारी, नेता, नेकपा (एमाले)
“अध्यक्ष ज्यूले निर्वाचन पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कुनै पनि नेतालाई भेट्नुभएको छैन, हाम्रो कुनै तहबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गर्नेबारे कुरा भएको छैन”, अधिकारीले भनेका छन्, “उहाँहरु गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन यस्ता चर्चा चलाइरहनु भएको छ । उहाँहरु कांग्रेसलाई गलाएर आफ्नो फाइदा लिने रणनीतिमा हुनुहुन्छ ।”
नेता अधिकारीले निर्वाचनको एमालेको जनआधार थप बलियो भएको बताउँछन् । “केही पालिका हार्‍यौं, हारेको कारण आन्तरिक हो”, उनले भनेका छन्, “तर हामी पाँच दलीय गठबन्धनलाई धेरै ठाउँमा जितेका छौं । मतमा कांग्रेसभन्दा पनि बलियो छौं ।”
गठबन्धनबाट धोका भएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाका धेरै नेताहरु भने एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए । “आगामी चुनावमा पनि कांग्रेसले टेको लगाउने केहीलाई हो, धेरैलाई अहिलेजस्तै धोका नै हुन्छ”, अधिकारीले भनेका छन्, “अहिलेको परिणामबाट बुझेका हामीतिरै आउनुहुन्छ ।”